ABO abaruun rakkina Oromoo furuu hin tahu! « QEERROO
ABO abaruun rakkina Oromoo furuu hin tahu!
Ibsaa Gaaddisaa irraa
ABO fi Hoggana Isaa abaaraa tahuun Rakkina Ummata Oromoo hiikuu hin tahu Saba Miliyoona 40 olii miti saboota kumootaan lakkaawwaman keessattiyu ilaalchi siyaasaa adda addaa jiraachuun waanuma maluudha. Biyya lafa kanarra jiru keessatti ummanni ykn Sabni Ilaalcha Walfakkaata qabu ni jira jechuun hin danda’amu. Ummanni Oromoo akka baayyina Ummata isa fi bal’ina dachii isaatti Dhaabolee siyaasaa adda addaa qabaachuun rakkina hin qabu ture. Rakkina ilaalchaa Qabaachuun rakkoo ummata ofii hiikuu nama hin dhorku. Yoo dantaa ofiif jecha bololuu tahe malee.
Nuti akka sabaatti tokko tahuun keenya ilaalcha garaa garaa qabaannus rakkoo tokko waan qabnuuf jalqaba atuu rakkina keenya irratti fuulleffannee salphina akka sabaatti nurra jiru keessaa baane gaarii ture.
Garuu yeroo ammaa wanti mul’ataa jiru Ebiluun hojjechuu nu dhorke, Dhaabni ebiluu badu malee hojjechuu hin dandeenyu kanneen jedhantu garaagartee ummata keenya gidduutti uumuuf oliif gadi Wixxifatu. An akka yaada kiyyaatti ABOn dhaaba Ummata Oromoo of barsiise ummata Amantii fi Gandaan Adda adda faffaca’ee ture tokko taasise dhaaba yoo maaluu hojjetame onnee ilmaan Oromoo keessaa baduu hin dandeenyeedha.
Dhugaadha Qabsoon dheerachuun namoota qabsicha keessa hin jirreef waan qabsichi bakkuma gaafa dhalatee sana jiru itti fakkaachuu mala.
Kanneen keessatti Qooda fudhatan garuu ni beeku maaf akka dheerate, amma ammo sadarkaa maalirra akka jiru.
“ABO fi hooggana isaa Abaaraa Oluun rakkina ummanni Oromoo keessa jiru furuu hin tahu” wannin mata duree irratti jedheef, yeroo ammaa namoonni qabsicha gufachiisuuf maqaa Oromootiin akka “Jeedala Gogaa Hoolaa Uffatte” jedhamuu kaayyoo ummata keenya gandaan diigu kan diinarraa maallaqa doolara hedduu waliin itti kenname galmaan gahuuf oliif gadi fiigan argaa waan jirruuf . Rakkoo ummata Oromoo ni fura kan jedhee itti amanu namni kamuu murnaanis tahee Nam-tokkeen furmaata isaa ummataaf dhiheessuun rakkoo kana hiikuuf hojjechuun dirqama nama sabaaf hadooduuti. Kana tahuu baannaan ammo atuu waa tokko hin dalagin taa’aniituma Dhaabni ebelu jedhamu badu malee hojjechuu hin dandeenyu jechuun dalagaa ummata diigutti fulleffachuun rakkoo ummataa hiikuu osoo hin taanee Ummatichi rakkoo caalu keessa akka seenuuf daandii uumuudha.
ABOs tahee Hogganoonni isaa akkan amanutti nama ykn Jaarmiyaa ummata ijaaru kan Qabsoo sabaa duubatti hin deebifne kamuu dirqama ABO tahuu qaba jedhanii akka inni ummata isaa Rakkoo keessaa hin baafneef dura dhaabbatu jedhee hin amanu. Kanneen Walabummaa fi Bilisummaa ummata keenyaaf biyya keenyaa Oromiyaa dura dhaabbatan kamuu garuu dura dhaabbachuun dirqama kanneen sabaaf falmanii dirqama Qabsaahota Bilisummaa hundaati.
Walumaa galatti ilamaan Oromoo rakkoon saba isaanii itti dhagahamu qabsoo sabichaa gufachiisuuf hojjechuurraa Sabicha rakkina keessaa baasuuf hojjechuutti fuullechuun dirqama ilamaan sabaa tahuu qaba.
Kan biraa Xumura irratti wannin jechuu barbaadu, nuti ilmaan Oromoo Aadaa Safuu fi Duudhaa Gaarii qabna. Garaagarummaa qabaannus nama tokko maqaa dhahanii arrabsuun nu ilmaan Oromoo irraa waan eeggamuu miti. Qabsaahota Keenya qabsoo sabichaa tursanii daddaaqama hedduu irraa dandamachiisanii har’aan gahan mararfachuu fi kabaja isaanif malu kennuufi malee akka nama saba Safuu hin qabne keessaa dhalateetti isaan Arrabsuu fi isan xiqqeessuun xiqqeenya keenya mul’isa malee beekaa ykn nama sabaaf dubbatu tahuu keenya hin mul’isu. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo wal Abaaruu fi wal arrabsuu dhiifnee diina keenya innikkaa Wayyaanee ilmaan keenya lafarraa daguugaa jiru irratti haaxiyyeeffannu. Dhiiga ilmaan Oromoo isinitti haatahu,Wareegama jaallan qabsoo Bilisummaa Oromoof jecha lubbuu isaanii dabarsanii sodaadha wal hin abaarina. Oggaa nuti wal abaarru diinni harka nutti naqatti. Kun dhaamsa kiyya dhuunfaati. Xumure.
« Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Qophii Amajjii 12, 2017
Ethiopia: Year of Brutality, Restrictions »